अहिले सम्म कै अनौ`ठो : काठमाडौ उपत्यका बाटै देखियो वि`श्वको सर्वो`च्व शिखर सगर`माथा !(हेर्नुहोस् फोटोमा ) – Eshankharapur
मुख्य पृष्ठ /Interesting/अहिले सम्म कै अनौ`ठो : काठमाडौ उपत्यका बाटै देखियो वि`श्वको सर्वो`च्व शिखर सगर`माथा !(हेर्नुहोस् फोटोमा )
अहिले सम्म कै अनौ`ठो : काठमाडौ उपत्यका बाटै देखियो वि`श्वको सर्वो`च्व शिखर सगर`माथा !(हेर्नुहोस् फोटोमा )
काठमाडौं । काठमाडौ उपत्यकाबाट विश्वको सर्वोच्व शिखर सगरमाथा देखिएको छ । कोरोना भाइरसपछि जारी लक`डाउनका कारण विश्वका धेरैजसो भागहरूमा हिमालहरु स्पष्ट देखिन थालेका छन् । अब माउन्ट एभरेष्ट अर्थात सगरमाथा पनि नेपालको राजधानी काठमाडौंबाट देखिन थालेको छ ।
यो दावी स्थानीय नेपाल टाइम्अखबारले गरेको छ । काठमाडौं उपत्यकाबाट सगरमाथा र यसका वरपरका धेरै तस्विरहरु सामाजिक सञ्जालमा भाइरल हुँदैछन् । लकडाउनले धेरै देशहरूमा वायु प्रदूषणको स्तर घटाएको छ ।
लकडाउनका कारण, हावा सफा भयो । नेपालको हावा पनि अब सुद्ध छ । अहिले सवारीहरू पनि चल्दैनन् । यसको कारण पनि प्रदूषणको स्तर अत्यन्त कम छ । तसर्थ, सगरमाथा र यसको वरपरको पहाडका चुचुरो काठमाडौंबाट देख्न सकिन्छ । हामी तपाईंलाई बताउँछौं कि माउन्ट एभरेष्ट अर्थात सगरमाथा काठमाडौं उपत्यकाबाट करिब २०० किलोमिटर टाढा छ । यति टाढा भए पनि माउन्ट एभरेष्ट काठमाडौंबाट देखिन्छ ।
यो ठूलो कुरा हो कि काठमाडौंबाट नै सगरमाथा देख्न सकिन्छ । सगरमाथाका यी तस्बिरहरू नेपाली टाइम्सका अखबारका फोटोग्राफर आभूषण गौतमले खिचेका हुन् । उनले यी तस्वीरहरू काठमाडौं उपत्यकाको चोभार क्षेत्रबाट लिएका हुन् । तथापि, अप्रिलमा त्यस्तो थिएन । काठमाडौंमा अप्रिल महिनामा धादिङ, नुवाकोट र चितवनको जंगलमा भएको आगो र उपत्यकामा फोहोर विसर्जन गरिएका कारण उपत्यकामा वायु प्रदूषण बढेको थियो । त्यसकारण माउन्ट एभरेष्ट देखिएन ।
काठमाडौंको वायु गुणवत्ता सूचकांक अर्थात् एक्यूआईमा हाल ७० प्रतिशत सुधार भएको छ । सगरमाथाका यी तस्वीरहरू १० मेको साँझ काठमाडौं उपत्यकाबाट लिइएको थियो । काठमाडौं उपत्यकाको मौसम यस दिन एकदमै सफा थियो । यति मात्र होइन, नेपालमा गत दुई महिनामा दम, क्रोनिक, ब्रोन्काइटिस, एलर्जी र श्वासप्रश्वाससम्बन्धी रोगबाट पीडित व्यक्तिहरूको संख्यामा कमी आएको छ ।
पुराना बिरामीहरूलाई राहत मिलेको छ । अस्पतालहरूमा श्वासप्रश्वासबाट पीडित व्यक्तिहरूको संख्यामा ठूलो कटौती भएको छ । त्यस्तो स्वच्छ हावा पछि नेपाल सरकारले ठूलो कदम चालेको छ । सरकारको विश्वास छ कि यसले विद्युतीय र ब्याट्रीबाट चल्ने सवारी साधनहरुको प्रवर्धन गर्दैछ ताकि वायु प्रदूषण घटाउन सकिओस् । यहाँलाई स्मरण गराउँ सगरमाथा नेपाल–चीन सीमामा पर्छ भनिए पनि मुल भाग नेपालको सोलुखुम्बु जिल्लामा पर्दछ ।
हेर्नुहोस यी फोटोहरु:
काला-पानी क्षेत्रमा पुग्यो नेपाली सेनाको हेलिकप्टर !!
आफ्नै कमाईले काठमाडौंमा घर ठ ड्याउँदै पूजा !
नेपालले लि`पु`लेकमा सेनाको बटा`लियन खटा`एको भन्दै भारतमा हल चल
निकै द’र्दना’क भिडियो, एकै परिवारमा ४ सन्तान अ’पाङ्ग, ७५ बर्षिय बुढी आमाले भि’क मागेर गुजारा चलाउदै (भिडियो)